Wasaaradda Amniga oo Warbaahinta uga digtay baahinta Wararka Al-Shabaab - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wasaaradda Amniga oo Warbaahinta uga digtay baahinta Wararka Al-Shabaab
January 17, 2018 Cali Yare459
Afhayeenka Wasaaradda amniga gudaha Somaliya C/casiis Xildhibaan ayaa Warbaahinta wuxuu uga digay inay baahiyaan wararka la xiriira Ururka Al Shabaab.
C/casiis Xildhibaan oo Saxaafadda la hadlay, ayaa wuxuu sheegay in aanan loo baahneyn buun buuninta wararka ku saabsan Shabaab, kadib markii qaar ka mid ah Idaacadaha Muqdisho ay baahiyeen war la xiriiray Afhayeenka Shabaab oo codkiisa laga sii daayay Idaacado ku yaal Muqdisho.
Wuxuu ku goodiyay Warbaahintii sii daysa wararka la xiriira Shabaab inay tallaabo ka qaadi doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Al Shabaab oo Somaliya ka dagaalama ayaa baahinta wararkooda marka la eego dhanka Saxaafadda waxa ay tahay in la soo xigan karo ficilada ay sameeyaan, maadaama sharciga Saxaafadda uu qeexayo in Warbaahinta madaxa banaan dhex dhexaad ay tahay.
C/casiis Xildhibaan ka hor Afhayeenka Wasaaradda amniga wuxuu si adag u dhaliili jiray Dowladii tan ka horeysay, isaga oo Baraha Bulshada ku soo bandhigi jiray dhaliilaha kala duwan ee dowladdaas laheyd.
Qaybaha Warbaahinta ayaa xilliyada qaar waxa ay handadaad iyo caburin joogto ah kala kulmaan shaqsiyaad ku cusub Saaxada Siyaasadda dalka.
Abshir Bukhaari oo ku guuleystay kursiga Beesha Saleebaan (Sawirro)